Isitudiyo esizolileyo, Indawo entle ngaphaya kolwandle - I-Airbnb
Isitudiyo esizolileyo, Indawo entle ngaphaya kolwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguShaun
Indawo yam ikwi-Kihei enelanga kwaye yimizuzu engama-20 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. Isitudiyo singaphaya kwendlela ukusuka eKalepolepo Beach kunye neWhale Sanctuary. Isitudiyo sisembindini waseMaui kufutshane neelwandle ezininzi, iiresityu, kunye neendawo zokuthenga eziluncedo kakhulu. Umkhenkce odumileyo wase-Ululani ochetyiweyo kunye neendawo ezahlukeneyo zokumisa iziqhamo zikumgama nje wemizuzu embalwa. Ungabukela umnenga, ibhodi yokubheqa, i-snorkel, ukubona, kwaye ukonwabele ukutshona kwelanga okumangalisayo eMaui!
Le ndawo imi ngasemva kwiresort yaseKihei Bay Surf. Indawo yeyunithi ikwindawo ezolileyo kakhulu kude nendlela enika abahambi imvakalelo yokuzola. Iyunithi inekhitshi epheleleyo ukuze ilungele zonke iimfuno zakho zokupheka, ibhedi enye yobukhulu bokumkanikazi, kunye nebhedi yesofa yokutsala. Ikwanayo nesantya esiphezulu se-intanethi ene-HDTV yedijithali kunye namajelo akho ezemidlalo owathandayo. Ngaba ucinga ngokuya elwandle kwaye ujonge? Kubonelelwe ngamathawula olwandle, izitulo zaselwandle, iicoolers, kunye neebhodi zeboogie kwezinye iilwandle ezintle kakhulu eMaui.
4.84 · Izimvo eziyi-159
I-Ululani's Shaved Ice yodumo ikwimizuzu kude emantla eyunithi. Izinyuko ezinqumla kwisitalato yiKalepolepo Beach kunye neWhale Sanctuary.
Umbuki zindwendwe ngu- Shaun
Iyunithi igcinwa ngabaphathi bepropathi yam, benza umsebenzi oncomekayo ngokugcina iyunithi ikwimeko entle kakhulu. Nceda uphathe iyunithi ngokungathi likhaya lakho :). Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo malunga nokuhlala kwakho ungaqhagamshelana nabo okanye nam.
Iyunithi igcinwa ngabaphathi bepropathi yam, benza umsebenzi oncomekayo ngokugcina iyunithi ikwimeko entle kakhulu. Nceda uphathe iyunithi ngokungathi likhaya lakho :). Ukuba unayo…
Inombolo yomthetho: 390011070019, TA-128-476-5696-01